Arzantina: Miteraka Resabe Ny Didy Fisamborana Ny Rain’ny Mpitsara Iray · Global Voices teny Malagasy
Arzantina: Miteraka Resabe Ny Didy Fisamborana Ny Rain'ny Mpitsara Iray
Voadika ny 04 Febroary 2018 2:20 GMT
Tamin'ny voalohandohan'ny taona 2010, nandidy mifanohitra amin'ny Governemanta Arzantina ny Mpitsara María José Sarmiento, nanakan ity farany tsy hampiasa ireo tahirimbola nafindran'ny Banky Foibe handoavana ny trosa. Noresahana tao amin'ny Kongresy Arzantina ilay famindràna vola ireo ary eo am-piandrasana vahaolana avy amin'ny rafipitsarana sy avy amin'ny Kongresy koa ny fampiasana azy amin'ny farany, ho amin'ny fahasorenana goavan'ny Filoha Cristina Fernández de Kirchner.
Kanefa, tamin'ny herinandro farany teo, nangatahan'ny faritany Arzantina ao Misiones ny hisamborana ny rain'ny Mpitsara, Sarmiento, Luis Sarmiento, miaramila taloha izay voampangana aminà vesatra maro momba ny fampijaliana sy fanitsakitsahana zon'olombelona teo anelanelan'ny 1973 sy 1977. Na nangatahan'ny mpampanoa lalànan'ny distrika ao Misiones aza ny hitsaràna tamin'ny Febroary 2006 ilay miaramila 85 taona, manamboninahitra taloha, ampahibemaso no nandavan'ilay Mpitsara ho tsy mahalàla ny maha-voarohirohy ny rainy taminà fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Niteny ilay Mpitsara fa “mazava ho azy fa misy ifandraisana” amin'ny didy navoakany manohitra ny governemanta ny fisamborana ny rainy.
Vetivety dia nisy fanehoankevitra momba ilay lohahevitra teo amin'ny Twitter. Ohatra, nanoratra ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta, Patricia Bullrich (@PatoBullrich), avy ao amin'ny Coalición Cívica, mpanohitra ny Governemanta, “Tezitra mafy aho tamin'ny fisamborana ny rain'ny mpitsara Sarmiento! Fasisma tsotra dia tsotra”. Netsum (@ReydePilos), mpampiasa Twitter, dia nampiseho ny “fanohanany tanteraka ny mpitsara Sarmiento. Tsy hitsahatra ny hanenjika ny fahavalony ara- pôlitika ity Governemanta ity”. Niteny i Majo Garcia Menendez (@majogm) fa “Mampieritreritra ny olan'ny rain'ny mpitsara Sarmiento. Mihamanjombona ny zavatra, rahoviana isika vao hihetsika?”
Avy any amin'ireo tsy mino ny resak'ilay Mpitsara Sarmiento, indrindra fa ilay ampahany ilazàny fa tsy mahalala na inona na inona momba ny dingam-pitsaràna momba ny rainy talohan'ny namoahany didy momba ny tahirimbolan'ny Banky Foibe, nanoratra ny mpampiasa Ezequiel Pozzo (@Pozzoe): “Heverin'ny Mpitsara Sarmiento fa ampiasaina ho amin'ny tanjona pôlitika ny mpitsara. Ny mpangalatra mihevitra fa mpangalatra toa azy daholo ny tsirairay”. Ary nanoratra i José Duhalde (@joseduhalde) fa “Niteny ny Mpitsara Sarmiento fa tsy nahalala hoe tafiditra anaty resaka famoretana tao Misiones ny rainy. Nandainga izy”
Ao anaty bilaogy, tahaky ny ao amin'ny Twitter, nisy ireo lahatsoratra avy amin'ny olona nitatitra fa voahenjika noho ny didy navoakany ilay mpitsara,raha ny sasany kosa nanamarika fa tonga talohan'ny didiny ilay resaka zon'olombelona. Tao amin'ny bilaogy Listao [es], nanonona loharano miresaka momba ny fandraisana anjaran'i Luis Sarmiento nandritra ny famoretana tsy ara-dalàna teo anelanelan'ny 1973 sy 1977 izy ireo. Ary tao amin'ny Tribuna de Periodistas [es], niteny izy ireo fa hetsika valifaty avy amin'ny Filoha sy ny vadiny, Filoha taloha Néstor Kirchner ny fanibohana ilay miaramila taloha.
Ary farany, naato ny didy fampisamborana an'i Luis Sarmiento, satria nanomboka tena niharatsy ny fahasalaman'ilay voampanga, noho ny taonany, fa hitohy ihany ilay fiampangana momba ny fanitsakitasahana ny zon'olombelona.